Ahoana ny fomba hanaingoana sary amin'ny Photoshop, Illustrator, Gimp ary an-tserasera | Famoronana an-tserasera
Jose Angel | | General, Tutorials
Rehefa mikarakara sary misy piksel izahay dia sarotra be ny manova azy. Raha vantany vao ahena ny habeny tany am-boalohany, dia lasa tsy afaka atao intsony ny miverina amin'ny fanitarana. Satria feno ny bitmap izy io ary lasa tsy voavaky sy tsy azo ampiasaina intsony. Izany no antony ilana ny fanaingoana sary amin'ny sary sasany amin'ireto tranga ireto. Mba hanaovana izany dia maro ny raikipohy. Ny sasany tena tsotra ary ny sasany somary sarotra kokoa, izay ahafahanao mitantana ny valiny araka ny itiavanao azy.
Raha mijery ny fomba fanaovana sary vongana isika amin'ny Internet, dia misy tutorial maro afaka mivoaka na fampianarana video mifandraika amin'izany, fa tsy misy manome anao ny safidy mety rehetra. Fantatsika ao amin'ny Creativos fa ny olona tsirairay dia manana fitaovana sy fahafaha-manao zavatra. Izany no antony hanomezantsika ohatra sy fitaovana maro samihafa momba ny fanaovana azy. Ho anao hahatratra ny iray amin'izy ireo.
Te hahafantatra ny fomba hanamboarana sary miaraka amin'ny Illustrator ve ianao? Photoshop? Sa, angamba, mila ataonao an-tserasera ve izany? Hodinihintsika eto ny fomba samihafa anaovana azy.
1 Ahoana ny fomba hananganana sary sary ao amin'ny Photoshop
2 Ahoana ny fomba fanaovana sary vongana sary ao amin'ny Adobe Illustrator
3 Ahoana ny fomba hanaingoana sary ao amin'ny Gimp
4 Ahoana ny fomba hanaingoana sary eto amin'ny Internet
4.3 Fananganana Vector
5 Vectorize sary ao amin'ny Corel Draw
Ahoana ny fomba hananganana sary sary ao amin'ny Photoshop
Misafidy sary vaovao tianay hamboarina. Topi-maso mialoha ny valiny, ho mora kokoa aminao ny hahafantatra ny fomba fiasan'io fiasa io. Araka izany, ny dingana voalohany horaisinay dia ny manaova ny sosona. Raha avela ny tena izy ary hiasa miaraka amin'ilay kopia, raha sanatria tsy maintsy miverina isika. Ity dingana ity dia mandaitra hatrany amin'ireo tetikasa rehetra ataonao.
Ataovy mitovy foana ny sosona miasa. Raha manao fahadisoana isika dia afaka miverina mivantana nefa tsy very asa
Andao handeha amin'ny Filter> Blur> Gaussian Blur. Miankina amin'ny kalitaon'ny sary dia tsy maintsy manjavozavo kely isika na latsaka, ka tsy maintsy manamarina ianao. Andramo atao tahaka ity sary manaraka ity. Na izany aza, mametraka teboka enina aho. Ary io teboka io dia miankina amin'ny halavirana na ny fanakaikezan'ny sary, mba hanomezana antsipiriany ireo teboka tsy dia hita loatra.
Amin'ny dingana manaraka ary amin'ity sosona ity izay efa manjavozavo, mandeha amin'ny maody fampifangaroana sary izahay. Ao no hametrahantsika 'Mizara'.
Ankehitriny isika dia hamorona takelaka famenoana na fanitsiana miaraka amin'ny endri-javatra 'Threshold'. Amin'ity dia hanampy feo izahay hanasongadinana ny antsipirian'ny sary. Tsy maninona na manampy tabataba be any ambadika aza izahay satria esorinay izany. Ny zava-dehibe dia voamarika tsara ny antsipirian'ny sary. Hanao dika mitovy amin'ireo dingana noforonina miaraka amin'ireto hitsin-dàlana manaraka ireto izahay:
Mandeha any amin'ny safidio> karazan-doko izahay avy eo. Ao amin'ny sary mialoha dia tsy maintsy tsindrio ary hanova izany. Nametraka fandeferana izahay izay mazàna dia eo anelanelan'ny 9 sy 20. Fa raha te hahitsy kosa dia alao antoka fa misy pikantsary feno fonosana ao amin'ilay sary. Safidintsika ny safidy mba 'hampiasa vola' ary tsindrio OK. Tsy mila manome fanahafana hafa izany.
Ho hitantsika ny fanamarihana ny sarintsika. Misafidy ny fitaovana Lasso izahay ary tsindrio havanana amin'ny sary «Manaova làlan'ny asa». Fandeferana 2 pixel sy voila. Raha tehirizina io dia mandeha amin'ny Edit> Farito ny endrika ampanjifaina.
Ahoana ny fomba fanaovana sary vongana sary ao amin'ny Adobe Illustrator
Amin'ity tranga ity, ny Illustrator dia programa manokana momba ny vector. Satria, tsy toy ny Photoshop, miasa mivantana amin'izy ireo izy fa tsy amin'ny piksel. Ka ho mora kokoa ny manazava.
Mampidira sary ao amin'ny Illustrator ao anaty File> Open. Rehefa ampidirinao ao amin'ny Illustrator ny sarinao dia hiseho voafantina izy io, raha tsy izany dia tsindrio fotsiny. Miaraka amin'ny sary voafantina, tsy maintsy mankany amin'ny menio am-baravarankely ianao ary ampidiro ny safidy "Image tracing. Manaraka izany, hiseho ny fikandrana sary Image Tracing, izay ahitanao ireo andiana safidy azonao amboarina arakaraka ny zavatra tianao na ilainao
Manaraka izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Preset Settings ianao, izay anananao safidy hisafidianana ny karazana kalitaon'ny vectorization ho an'ny sarinao. Ary koa ao amin'ny Threshold dia azonao atao ny manitsy ny kalitao amin'ny fomba milamina kokoa, toy izany koa amin'ny maody loko, afaka misafidy grayscale na B / W.
Amin'ity tranga ity dia afaka miroso amin'ny fisafidianana ny Hi-Fi Photo ao anaty preset ianao, mandinika mandeha ho azy ny asa izay atomboka amin'ny programa amin'ny sarinao. Ity dingana ity dia mety maharitra segondra vitsy arakaraka ny fahaizan'ny solosainao sy ny fahasarotan'ilay sary.
Hahazo sary efa niasa tamin'ny rindrambaiko Illustrator ianao ary handeha amin'ny bara miloko noho ny kalitaony. Amboary ny tsiro, mety tsy hitovy ny sary tsirairay. Noho izany dia tokony hiezaka ianao mandra-pahatongan'ny fanirianao. Ity ampahany ity dia miresaka ny sary sy ilay olona. Avy eo ianao dia mankeny amin'ny menio 'Object' ary misafidy 'Expand'. Any no hanananao ny sarinao niova fo.
Ahoana ny fomba hanaingoana sary ao amin'ny Gimp
Ny iray amin'ireo fomba hanamboarana sary ny sary dia matetika miaraka amin'ny fitaovan'ny penina. Ity endrika ity dia be pitsiny kokoa ary manome aretin'andoha. Misy ny milaza fa ny fanaovana an'io fomba io sy ny famadihana azy amin'ny sary dia tsy fanaovana sary vongana. Izay amin'ny famaritana ny vectorization mety ho marina. Satria manandrana manova ny sary amin'ny habeny izy nefa tsy manary ny kalitaony.
Ao amin'ny Gimp dia azontsika atao ny mampiasa an'io forme io amin'ilay antsoina hoe 'Digitize the image', fa na ahoana na ahoana, rehefa mivelatra na mampihena ny sary dia mijanona ho simba. Mbola toa sary kely ihany io. Ny vahaolana amin'izany dia mety hampihena azy amin'ny alàlan'ny fitaovana 'Gaussian blur' hampihena ny pixelation. Raha vantany vao tsy mifantoka intsony isika dia mampiditra medium 'Threshold'. 120/255 bebe kokoa na latsaka ary ho zavatra toy ny vectorized izany.
Mba hanatsarana ity sary ity dia afaka mandeha amin'ireto fitaovana fanasokajiana an-tserasera manaraka ireto isika. Ary tahirizo amin'ny endrika .svg hampiasaina amin'ny fitaovana rehetra.
Ahoana ny fomba hanaingoana sary eto amin'ny Internet
Ity no fomba mora indrindra handefasana sary. Misy pejy maromaro natokana ho an'ity. Mila manaraka dingana tsotra telo fotsiny ianao. Voalohany, safidio ny sary alaina avy amin'ny solo-sainao ary alefaso amin'ny Internet. Matetika misy ny kisary 'Upload'. Indraindray ity sary ity dia hanana toerana voafetra 1MB na 2MB farafaharatsiny. (Izay no mahatonga azy tsy ho loharano ilaina foana) Manamarika ny fizotran'ny fanaingoana ianao ary avy eo maka endrika format .svg. Amin'ity fomba ity no hahazoanao ny sary vita amin'ny vector. Tsy manana siansa intsony izy io.
Amin'ity lisitra manaraka ity dia homenay anao ireo tena atoro anao hampiasa an'ity endrika ity.
Tsy manana fiasa fanampiny ity tranokala ity. Araka ny nolazaiko tamin'ny fampidirana, manomàna, mampakatra ary misintona. Mahay.
Izy io dia iray amin'ireo feno indrindra ary atolotra indrindra. Ny Vectormagic dia manana safidy betsaka kokoa, toy ny kalitaon'ny antsipirihany sy ny loko. Amboary ny valiny, esory ny background ... ankoatry ny hafa.
Mbola manana fitaovana mamela antsika handeha amin'ny bitmap mankany amin'ny sary vita vector ihany isika nefa tsy manaja ny lokony. Azo atao ihany koa ny miditra sary amin'ny Internet fa tsy ny eo an-toerana ihany. Raha tsy izany dia tsy ho afaka hanao asa hafa intsony isika: na manitsy ny drafitra, na ny loko, na ny mombamomba na zavatra hafa.
Vectorize sary ao amin'ny Corel Draw
Corel Draw, miaraka amin'ny fanaingoana an-tserasera, angamba no fitaovana tsotra indrindra. Raha misafidy sary iray toy ny taloha isika tamin'ny 'Tarantino' ary mampitombo ny voalohany dia ho hitantsika ny pixelation. Ankehitriny dia hampahafantatra izany ao amin'ny Corel Draw isika.
Raha vantany vao azontsika izany, dia handeha 'vectorize bitmap' isika (hanaraka ny bitmap); 'Soritra ivelany' sy 'logo amin'ny antsipiriany' (Sary famantarana amin'ny antsipiriany). Amin'ny sary ankavia dia hiseho ilay sary tany am-boalohany ary eo ankavanana ny sary namboarina. Aiza no ahafahantsika manamarina ny fanesorana ireo pixel. Tsy misy intsony. Mazava ho azy, misy toerana ambony kokoa amin'ny antsipiriany na dia miankina amin'ny sary aza. Antsipiriany, fanalefahana, zoro ary antsipirian'ny loko. Raha vao resy lahatra ianao dia tsindrio 'OK'.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fomba hanaingoana sary
Antonio Garcia Rodriguez dia hoy izy:
Mila milaza zavatra iray fotsiny aho, Fantastic, miara-miasa amin'ny Photoshop sy ny autocad aho, tamin'ity fotoana ity dia tao anaty paradigma iray misy sary sy vectorisation aho, saingy noho ny famoahana anao dia afaka nahatratra ny tanjona aho.
Valiny tamin'i Antonio García Rodríguez
Fampitoviana amin'ny typografia, ambaratongam-pahefana, ary fifanoherana typografika
Mandraisa anjara amin'ny fifaninanana Slowwalk ary mahazoa 1000 euro